Ukuminyaniswa Kwesithombe Kuyisidingo Sokusesha, Iselula, Nokusetshenziswa Kokuguqulwa | Martech Zone
Lapho abadwebi bezithombe nabathwebuli bezithombe bekhipha izithombe zabo zokugcina, ngokuvamile azithuthukiswanga ukunciphisa usayizi wefayela. Ukuminyaniswa kwesithombe kungabunciphisa kakhulu usayizi wefayela lesithombe - ngisho nama-90% - ngaphandle kokunciphisa ikhwalithi esweni. Ukunciphisa usayizi wefayela lesithombe kungaba nezinzuzo ezimbalwa:
Izikhathi Zokulayisha Ngokushesha - ukulayisha ikhasi ngokushesha kwaziwa ngokuhlinzeka ngesipiliyoni esiphakeme kubasebenzisi bakho lapho bengeke bakhungatheke khona futhi bazozibandakanya isikhathi eside nesayithi lakho.
Izikhundla Zokucinga Zomzimba Ezithuthukisiwe - I-Google ithanda amasayithi asheshayo, ngakho-ke isikhathi esiningi lapho ungafinyelela khona ngezikhathi zakho zokulayisha isayithi, kungcono!
Ukukhuphuka Kwamanani Wokuguqulwa - izingosi ezisheshayo ziguqula kangcono!
Ukubekwa kwe-Inbox okungcono - uma wondla izithombe ezinkulu ezivela kusayithi lakho ku-imeyili yakho, zingakudonsela kufolda engenamsoco esikhundleni sebhokisi lokungenayo.
Akunandaba neklayenti, ngihlala ngicindezela futhi ngilungisa izithombe zabo futhi ngibona ukuthuthuka kusivinini sekhasi labo, izinga, isikhathi esizeni, namazinga okuguqulwa. Ngempela kungenye yezindlela ezilula zokuqhuba nokwenza kahle futhi kunenzuzo enkulu ekutshalweni kwemali.
Ungakusebenzisa Kanjani Ukusetshenziswa Kwesithombe
Kunezindlela eziningi zokusebenzisa ngokugcwele izithombe kokuqukethwe kwakho.
Khetha izithombe ezinhle - abantu abaningi kakhulu bawubukela phansi umthelela wesithombe esihle ukuthola umlayezo… noma ngabe yi-infographic (efana nale ndatshana), umdwebo, uxoxa indaba, njll.
Ukucindezela izithombe zakho - zizilayisha ngokushesha ngenkathi zigcina ikhwalithi yazo (sincoma Kraken futhi ine-plugin enkulu ye-WordPress)
Lungiselela isithombe sakho amagama wamafayela - Sebenzisa amagama angukhiye achazayo ahambisana nesithombe bese usebenzisa amadeshi (hhayi ama-underscore) phakathi kwamagama.
Lungiselela isithombe sakho izihloko - izihloko zimbozwe kwiziphequluli zesimanje futhi kuyindlela enhle yokufaka ukubizelwa esenzweni.
Thuthukisa umbhalo wakho ohlukile wesithombe (umbhalo we-altUmbhalo we-alt wenzelwe ukufinyeleleka, kepha enye indlela enhle yokufaka amagama angukhiye afanele esithombeni.
isixhumanisi izithombe zakho - Ngiyamangala ngenani labantu abasebenza kanzima ukufaka izithombe kepha bashiye isixhumanisi esingasetshenziselwa ukushayela abantu abengeziwe ekhasini lokufika noma okunye ukubizelwa esenzweni.
Engeza umbhalo ezithombeni zakho - abantu bavame ukudonswa isithombe, okunikeza ithuba engeza umbhalo ofanele noma ukubizelwa esenzweni ukushayela ukuzibandakanya okungcono.
Faka izithombe kufayela lakho le- Amamephu amasayithi - sincoma Isikhundla se-Math SEO uma uku-WordPress.
Sebenzisa isabele izithombe - izithombe ezenzelwe i-vector nokusebenzisa srcset ukubonisa osayizi bezithombe abaningi, abalungiselelwe, kuzolayisha izithombe ngokushesha ngokuya ngedivayisi ngayinye ngokuya ngesinqumo sesikrini.
Layisha izithombe zakho kusuka kufayela le- inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe (CDN) - lawa masayithi atholakala ngokwendawo futhi azosheshisa ukulethwa kwezithombe zakho kwiziphequluli zezivakashi zakho.
Umhlahlandlela Wokusetshenziswa Kwezithombe Zewebhusayithi
Le infographic ephelele evela kwiWebhusayithiBuilderExpert, Umhlahlandlela Wokusetshenziswa Kwezithombe Zewebhusayithi, ihamba kuzo zonke izinzuzo zokucindezelwa kwesithombe nokwenza kahle - kungani kubalulekile, izici zefomethi yesithombe, kanye nesinyathelo ngesinyathelo ekusebenziseni isithombe.
Ipulatifomu Yokucindezelwa Kwezithombe zeKraken
Uma ufuna i-bump esheshayo ezikhathini zakho zokulayisha isiza, ungabe usadlula lapho Kraken, enye yezinsizakalo ezihamba phambili kunetha! Sake sazama izinsizakalo zamahhala esikhathini esedlule - kepha imidwebo yethu emikhulu yayivame ukuba ngosayizi wefayela kakhulu wensizakalo yabo - okuhlula uhlobo!
Kraken ine-interface ephelele yewebhu, i-API enamandla, futhi - ngokubonga - i-WordPress Plugin! I-plugin ikuvumela ukuthi uzisebenzisele ngokuzenzakalela lapho ulayisha kanye nokwenza ngobuningi ezinye izithombe obukade uzilayishe ngaphambili. Imiphumela iyamangalisa impela:
Futhi, uma uyi-ejensi, insizakalo kaKraken inikeza okhiye abaningi be-API ukuze ukwazi ukuxhuma amakhasimende amaningi kule nsizakalo
Inothi nje, sisebenzisa ifayela lethu le- Isixhumanisi sokusebenzisana seKraken kulokhu okuthunyelwe! Ngiyethemba uzojoyina futhi uvune izinzuzo.
Tags: amathegi we-altumbhalo we-altCdnisivinini sesayithi le-googleUkuminyaniswa kwesithombeigama lefayela lesithombeukuthuthukisa isithombeumhlahlandlela wokusebenzisa isithombei-image optimization infographicusayizi wesithombeimephu yesithombeiziqu zezithombecabangaKrakennokwandisa izithombeisivinini sekhasiizithombe eziphendulayoseoUkusebenziseka kahle kwesithombei-shortpixelisivinini sesizasrcsetamancane pngumhlahlandlela wokusebenzisa iwebhusayithiiwebhsayithiUkuminyaniswa kwesithombe se-wordpressusayizi wesithombe se-wordpressi-plugin kraken ye-wordpresswp smush